AWS အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ကဘာလဲ? AWS လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများစာရင်း | ၎င်းတို့အားသင်တန်း
23 ဖေဖော်ဝါရီ 2017
တစ်ဦး AWS လက်မှတ်ကဘာလဲ?
AWS လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ & Certificate များစာရင်း
AWS - Solutions ဗိသုကာ:
AWS အပေါ် Architecting:
Solutions ဗိသုကာပညာရှင်များ, SysOps အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ & Developers များအတွက်တွဲဘက်-Level အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် & လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများပေး AWS ။ ဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions AWS ကိုယ်စား Solutions ဗိသုကာ & DevOps အင်ဂျင်နီယာများများအတွက် Professional က-Level အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းပေးထားပါတယ်။
1 http://www.stumbleupon.com/ ဇူလိုင်-17
2 https://www.reddit.com/ ဇူလိုင်-17
3 http://www.citeulike.org/ ဇူလိုင်-17
4 https://delicious.com/ ဇူလိုင်-17
5 http://www.pinterest.com/ ဇူလိုင်-17
6 https://www.tumblr.com/ ဇူလိုင်-17
7 https://www.diigo.com/ ဇူလိုင်-17
8 http://slashdot.org/ ဇူလိုင်-17
9 https://www.google.com/bookmarks/ ဇူလိုင်-17
10 http://www.newsvine.com/ ဇူလိုင်-17
11 http://digg.com/ ဇူလိုင်-17
12 http://www.bibsonomy.org/ ဇူလိုင်-17
13 http://tryengineeringnews.org/ ဇူလိုင်-17
14 http://www.folkd.com/ ဇူလိုင်-17
15 http://www.pearltrees.com/ ဇူလိုင်-17
16 http://independencescience.co/ ဇူလိုင်-17
17 http://www.hollywood2012.com/ ဇူလိုင်-17
18 http://wegokiev.com/ ဇူလိုင်-17
19 http://fossilafrica.com/ ဇူလိုင်-17
20 http://kbrabbitry.com/ ဇူလိုင်-17
21 http://www.bizsugar.com/ ဇူလိုင်-17
22 http://www.iesa.co/ ဇူလိုင်-17
23 http://www.fearsteve.com/ ဇူလိုင်-17
24 http://ihaan.org/ ဇူလိုင်-17
25 http://bosplus.org/ ဇူလိုင်-17
26 http://esa-2013.com/ ဇူလိုင်-17
27 http://immigrationlawpros.com/ ဇူလိုင်-17
28 http://speedycon.org/ ဇူလိုင်-17
29 http://utoms.org/ ဇူလိုင်-17
30 http://atlhtml5.net/ ဇူလိုင်-17
31 http://london8.net/ ဇူလိုင်-17
32 http://wirefan.com/ ဇူလိုင်-17
33 http://dictaf.net/ ဇူလိုင်-17
34 http://jofrati.net/ ဇူလိုင်-17
35 http://t3b-system.com/ ဇူလိုင်-17
36 http://gardicanin.net ဇူလိုင်-17
37 http://www.usefulenglish.net ဇူလိုင်-17
38 http://relevare.net/ ဇူလိုင်-17
39 http://todays1051.net/ ဇူလိုင်-17
40 http://temateater.net/ ဇူလိုင်-17
41 http://aixindashi.org/ ဇူလိုင်-17
42 http://gen-eff.net/ ဇူလိုင်-17
43 http://vtv10.com/ ဇူလိုင်-17
44 http://youmob.com/ ဇူလိုင်-17
45 http://tatvanstories.com/ ဇူလိုင်-17
46 http://gardicanin.net/ ဇူလိုင်-17
47 http://www.pixador.net/ ဇူလိုင်-17
48 http://atlasassistans.net/ ဇူလိုင်-17
49 http://www.usefulenglish.net/ ဇူလိုင်-17
50 http://www.addusastory.com/ ဇူလိုင်-17
51 https://dzone.com ဇူလိုင်-17
52 http://bjwhj.com/ ဇူလိုင်-17
53 http://url.org/ ဇူလိုင်-17
54 http://cocosislandsnews.info ဇူလိုင်-17
55 http://www.jodohkita.info/ ဇူလိုင်-17
56 http://www.airpim.biz/ ဇူလိုင်-17
57 http://www.prbookmarks.com/ ဇူလိုင်-17
58 http://www.bookmark4you.com/ ဇူလိုင်-17
59 http://www.craftjuice.com/ ဇူလိုင်-17
60 http://www.linkr.hu/ ဇူလိုင်-17
61 http://www.acymca.net/ ဇူလိုင်-17
62 http://www.designfloat.com/ ဇူလိုင်-17
63 http://www.yemle.com/ ဇူလိုင်-17
64 http://www.zariaetan.com/ ဇူလိုင်-17
65 http://eugendorf.net ဇူလိုင်-17
66 http://www.openfaves.com/ ဇူလိုင်-17
67 http://www.sitejot.com/ ဇူလိုင်-17
68 http://www.tourdion.com/ ဇူလိုင်-17
69 http://www.postolia.com/ ဇူလိုင်-17
70 http://www.addthismark.com/ ဇူလိုင်-17
71 http://www.yoomark.com/ ဇူလိုင်-17
AWS နည်းပညာဆိုင်ရာ Essentials:
အဆိုပါ AWS စီးပွားရေး Essentials သင်တန်းသင်တစ်ဦးသည်မိုဃ်းတိမ်ရွေးချယ်ရေးမဟာဗျူဟာဆန်းစစ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုကောင်းပြင်ဆင်ထားသောရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ, သင်ပိုကောင်း AWS မိုဃ်းတိမ်ကိုနားမလည်ကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုလုံခြုံရေးအပါအဝင် AWS ၏အခြေခံနှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့မိုဃ်းတိမ်ကိုကွန်ပျူတာများ၏အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပွဲ, နှင့်ငွေ related အားသာချက်များ။ ဒါဟာအသီးအနှံများမိုဃ်းတိမ်ကိုသင့်တော်ဆီလျော်ဘို့စနစ်များကိုတင်ဆက်ပြောင်းလဲနေသောစည်းရုံးရေးအိုင်တီနှင့်ဝယ်ယူအစိတ်အပိုင်းများအမှာစကားနှင့် AWS န်ဆောင်မှုအိုင်တီစီမံခန့်ခွဲမှု rehearses ကုန်ကျပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ #AWS သင်တန်း
အဆိုပါ AWS လက်မှတ်ရ Solutions ဗိသုကာ - တွဲဘက်စာမေးပွဲအတွေ့အကြုံကိုယင်း AWS platform ပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေ applications များနှင့်စနစ်များကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူလူများအတွက်လျာထားသည်။ သင်သည်ဤစာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့နားမလည်သင့်၏စာမေးပွဲစိတ်ကူးများပါဝင်သည်: ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်စေလွှတ်ချက်နဲ့အလွန်လက်လှမ်းနှင့် AWS အပေါ်သည်းခံစနစ်များကိုအပြစ်တင်။ #AWS လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
AWS အပေါ် Architecting AWS အပေါ်အိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ခြင်း၏အခြေခံကိုဖုံးလွှမ်း။ အဆိုပါသင်တန်းအစီအစဉ်များ comprehension AWS န်ဆောင်မှုအားဖြင့် AWS တိမ်တိုက်များ၏အသုံးချတိုးဖို့ဘယ်လို draftsmen နှင့်ဤဝန်ဆောင်မှုများ cloud-based အစီအစဉ်များသို့ fit ကိုဘယ်လိုပြသနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဒီသင်တန်းကို AWS ခွဲနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် AWS အပေါ်စံပြအိုင်တီအစီအစဉ်များ architecting ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်းစားပါကကူညီမှအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့်သတ်မှတ်မည့်အစီအစဉ်နမူနာမိုဃ်းတိမ်ကိုစီး accentuates ။ လူအပေါင်းတို့သည်သင်တန်းမှတဆင့် Contextual စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအချို့ AWS clients များဟာသူတို့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်သူတို့ actualized သည့်နည်းစနစ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖော်ပြထားပါပြီဘယ်လိုပါရှိပါတယ်။ #AWS လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ
Google+ မှာ (အသစ် window တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့) အပေါ်မျှဝေဖို့ကိုနှိပ်ပါ
စားဖိုမှူး Automate နှင့် AWS နှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်စီမံခန့်ခွဲ
အဘယ်ကြောင့် AWS လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအရေးကြီးပါသလဲ ဒေါ်လာအတွက် AWS လက်မှတ်ရ Developer တွေလစာ